110 / 240V AC Ayikho i-Wire SMD 5730 ukukhanya kwe-LED,Ukukhanya Kwe-strip Led,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - I-China 110 / 240V AC Ayikho i-Wire SMD 5730 ukukhanya kwe-LED, Umkhiqizi nomhlinzeki
110 / 240V AC Ayikho i-Wire SMD 5730 ukukhanya kwe-LED. Sine-webs enkulu yokukhethwa kwe-voltage ephansi ne-voltage ephakeme ye-LED Strip Lights kokubili izinhlelo zokusebenza zokukhanyisa zangaphandle nangaphandle .Umunye okuthiwa uholele i-neon flex ukukhanya noma ukuholwa ukukhanya okuqinile, okuholeleke nge-flex. Sithenga izinhlobo ezihlukahlukene zama-CE kuwo wonke amazinga okushisa ama-kelvin kanye nezinhlobo eziningi zezimpawu zesikhumbuzo ongakhetha kuzo. Sebenzisa izikhwama zekhwalithi eziphezulu ze-LED zezindawo zokukhanyisa zangaphakathi nezangaphandle lapho kudingeka khona ukukhanya okuqhubekayo okuhlala isikhathi eside, eco-friendly futhi customizable. Yonke imiqulu yethu yokukhanya ye-Ribbon Star tape yokukhanya ephansi ihlolwa ngesandla, ilinganiselwe amahora angu-50 000 okuphila futhi ibe newaranti engama-2. Dlulisa amehlo kokukhethwa kwethu koNdunankulu we-RGB, ne-Single Color strips ngezansi noma usinike ucingo nanoma yimiphi imibuzo okufanele ukhethe ukuthi yikuphi ukukhanya kwe-strip ye-LED okungcono kakhulu kuwe.Kuphumelele ukukhanya okukhanyayo namasevisi e-SMD aphezulu esetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezifana nokukhanya okuphezulu okukhanyisa umsebenzi, ukukhanya kwe-fluorescent ne-halogen ukulungiswa kokukhanyisa, izinhlelo zokusebenza zokukhanyisa okungaqondile, ukuhlolwa kwe-Ultra Violet ngesikhathi sokukhiqiza, ukusetha nokugqoka izingubo, ngisho nezitshalo ezikhulayo.( 110 / 240V AC Ayikho i-Wire SMD 5730 ukukhanya kwe-LED )
110 / 240V AC Ayikho i-Wire SMD 5730 ukukhanya kwe-LED
©2005-2018 Karnar Xhumana nathi Imephu yesayithi Last modified: June 19 2019 03:46:30.